QABQABLAYAASHA SOOMAALIYEED IYO QODOBKA 19AAD.
Omar M. Farah Dhollawaa
Waxaa la yaab ah in maanta laga murmo lagana biya diido jiritaanka qodobka 19aad ee distuurka ku meel gaarka kaas oo sheegaya jiritaanka dastuuriga ah ee dawlad goboleedyo iskood isu maamula qaybse ka ah dawlad wadaaga oo u dhalata ummada Soomaaliyeed. Haddaba waxaa mudan in wax yar laga yiraahdo waxa keenay jiritaanka Dawlad Goboleedyo iyo qiimaha ay u leedahay dhamaan ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa samaystay. Maxayse kuwa diidani ku diidan yihiin jiritaanka iyo hawlgalka Dawlad Goboleedyo Soomaaliyeed oo qayb ka ah Dawlad Soomaaliyeed oo wadaag ah, laakiinse leh awooda gaara oo ay ku maamushaan dhulka iyagu ay ka taliyaan, iyadoo ammuuraha ugu muhiimsan Qaranka ay Dawlada Dhexe gacan ku haynteeda iyo maaraynteeda leedahay ?
Waxaa mudan in la xassuusto in samaysanka Dawlad Goboleedyada ay keentay natiijadii laga dhaxlay dagaalka sokeeye oo sababay is-khilaaf, kala-shaki, iyo is-aamin la’aan hor-istaagtay in la hello xukun guud oo la wadaagi karo. Ma jirin bilawgii dagaalka sokeeye aragti oranaysa in la hello Dawlad Goboleedyo, waxayse lagama maarmaan noqotay ka dib markii la waayey dawlad Soomaaliyeed oo lagu heshiin karo. Iyadoo markaas laga duulayo sida ay lagama maarmaan u tahay in la hello maamul iyo kala dambayn waxaa khasab noqotay in loo hawlgalo samaysanka Dawlad Goboleed u adeegta intii markaas is-raaci karta. Waxaa xaqiiqa ah, in shalay maamulkii la isku deyey in laga sameeyo magaalada Mogadisho, hadafkiisuna ahaa inuu gaaro dhulka Soomaalida oo dhan uu dhaafiwaayey xaafadii lagu soo dejiyey madaxdeeda sababta ugu weynina ay ahayd iyadoo inta qabiil oo degan Mogadisho aan qabiilna aamini karayn qabiil kale.
Dhinaca kale, Dawlad Goboleedyada hadda jira oo ay Puntland ka mid tahay, ahna meesha hadda shiishada lagu hayo waxaa ka samaysmay maamul gaarsiisan dhamaan inta hoos timaada, kaas oo ilaa xad dhisay nadaam shaqaynaya oo leh kala dambayn haba iska dhutiyee. Waa jirtaa in khilaaf dastuuri ah, iyo muran ku salaysan sidatan ayaa sidaan dhaanta uu ka dhex oognaa mudda gaaban, mase gaarin marna heerka dhibaatooyinka illaahay keliya iyo cida ay haysataa tirin karaan oo ka aloosan Mogadisho halkaas oo weliba dawlada badan oo Soomaaliya danaynayey geliyeen maal aad u badan oo loogu talagalay in lagu xasiliyo laguna dhiso Dawlad Soomaaliyeed.
Puntland waxay soo jiidatay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhamaan gobolada Soomaaliya kuwaas oo nolol ka samaystay waxna uga taray dadkooda ku nool daafaha kale ee Soomaaliya, waxayna ixtiraam kaga kasbatay caalamka daneeya Soomaaliya, waxaas oo dhamina wuxuu ku yimid Dawlad Goboleedka la dhisay oo illaa xad macquulla shaqaynaysa, una muuqata mid maalinba maalinta ka dambaysa ka soo raynaysa.
Qolyaha caqabada ku noqday shirkaa nabad-raadinta Soomaaliyeed ayaa si gaara farta ugu fiiqa Madaxweynaha Dawlad Goboleedka Puntland Cabdullahi Yusuf Ahmed, waxaase xaqiiqa ah marka laga hadlayo meelaha ay hor-fadhiyaan kuwa qodobkan 19aad diidani inay awoodi waayeen in hal habeen nabad lagaga seexdo dhulka ay joogaan dadkoodiina ay aafaysay belaayo walba oo illaahay laga hoos galo. Cabdullaahi Yusuf ama xabad ha adeegsado, ama xeelad ha adeegsado ama xabiibnimo ha adeegsadee wuxuu dhistay maamul shaqayna maamulkaas ayuuna ku mina sheegayana shakhsiyana annigu ma garan karo sabab ay kaga cararaan oo ay ku eedeeyaan, haddii aanay ahayn baroortu orgiga ka weyn.
Soomaaliland oo iyagu mawqif cad ka qaadatay arrinta nabad-raadinta Soomaalida ayaa ah meesha kale ee qabqablayaasha Somalidu diirada saareen maanta, meeshaas oo iyadu in mudda ahba ku sii talaabsanaysay horumar la taaban karo iyo xasilooni, sababtayna inay soo jiidato shisheeye iyo sokeeye labadaba. Waxayna Somaliland maanta gaarsiisan tahay in hay’ada badan oo caalami ah oo hadalkoodu qabad leeyahay ku doodaan in Soomaaliland ka hoos baxdo Somalia iskeedna isu taagto maadaama Somaliyana aan xal ka soo socon iyaguna muujiyeen dadaal iyo xasilooni la aqbali karo.
Su’aasha hadaba isweydiinta mudani waxa weeye maxaa keenay kuwii fashilmay oo talada soo raadsan lahaa inay tala-keenayaal noqdaan, kana dhigaan shardi si loo heshiiyo in la noqdo sidooda – dad aan hab dawli ah ku shaqayn, aan kala dambayn, joogta isu laaya, , is dhaca, cidina aanay amaan ku helli karin dhulka ay joogaan min cirooli ilaa cunug dhashay?
Waxaa shaki badani ku jirin in nimankaan odaasha ahi aanay qaldanayn sababtoo ah, adduunka maanta waxaa ka jira mabda ganacsiga laga soo minguuriyey oo oranaya dukaanka dharka fashionka lagu gado waa inuu gadaa qof si fashion ah u lebisan, dukaanka alaabta isboortiga iibiyaa waa in uu gadaa qof isboorti ah ama sidiisa u lebisan, goobaha ay ku tamashlay-yaan dadka qaawani waxaa shardi ah dadka gelayaa inay qaawan yihiin, sidaas darteed in qabqablayaasha Soomaaliyeed shuruud ka dhigaan ninkii nala heshiinayaa marka hore sidayada ha noqdo xaq iyo toos bay u leeyihiin.
Waxaa xaqiiq, sax iyo toosba ahayd in kuwa samaystay nadaam shaqaynaya iyagu yiraahdaan la hadli mayno cid aan nadaam samaysan shardina kaga dhigaan ciday la hadlayaan inay ugu horrayn la timaado nadaam la aqoonsan yahay si dadka ay is hor fadhiisanayaa isku miisaan iyo isku aragti ay u ahaadaan. Haddii taas la waayo, waxaan shaki lahayn, in marka la burburiyo nadaamyada hadda jiraa wixii ay samaysteen uu noqon doono bartilmaameedka ay qabato shiishada mooryaantu, malaha, dibna loo weydiin doono wixii ka hara nadaamyadaas magdhowgii wixii burbur iyo belaayo dhacday, meeshii ay ka ahaan lahayd cagsigeeda.
MA OGTAHAY IN WARARKA SOOMAALIDA EE INGIRIISKA KU QORAY AAD MARKASTA KA HELI KARTIDID MEESHA AY BOGGA HORE SOMALITALK KAGA QORAN TAHAY: LATEST NEWS FROM SOMALIA .